Sergio Ramos oo ka jawaabay su’aal la xiriirtay haddii uu doonayo in Lionel Messi uu ku guuleysto abaal-marinta Ballon d’Or – Gool FM
(Paris) 29 Nof 2021. Kaddib sanado badan oo ay hardamayeen garoonka iyagoo laba koox kala mataya Barcelona iyo Real Madrid, Lionel Messi iyo Sergio Ramos ayaa markii ugu horreysay shalay u wada ciyaaray naadiga Paris Saint-Germain.
Messi ayaa xiddig sare ka ahaa kulankii uu Ramos ciyaaray safashadiisii ugu horreysay PSG tan iyo kusoo biiristiisii, waxaana kabtankii hore ee Barca uu caawiye ka ahaa dhammaan saddexdii gool ee ay dhalisay kooxdiisa shalay kulankii ay 3-1 kaga adkaadeen naadiga Saint-Etienne.
Si kastaba ha ahaatee, Difaaca reer Spain ayaa la weydiiyay sida uu u arko inuu garoon la wadaagay Messi oo ay markan hal maaliyad wada xiran yihiin, waxaana uu sheegay in weeraryahanka reer Argentina uu yahay mid xirfad gaar ah leh isla markaana ay sharaf u tahay inuu kooxda kala tirsan yahay.
Dhinaca kale, waxaa la weydiiyay haddii uu doonayo inuu La Pulga hanto abaal-marinta Ballon d’Or sanadkan 2021, waxaana uu ku jawaabay: “haa, dabcan waxaan rabaa inaan difaaco wiilasha igu kooxda ah, waxaanna u rajeynayaa nasiib dunida oo dhan” ayuu yiri Ramos oo la hadlayay ESPN.
Si kastaba ha ahaatee, Leo Messi ayaa ka mid ah musharraxiinta loo saadaalinayo abaal-marinta Ballon d’Or sanadkan iyadoo xafladda lagu abaal-marinayo laacibka sanadka ay caawa ka dhaceyso magaalada Paris ee dalka Faransiiska.